वर्डप्रेस प्लगइन्स लागत पैसा गर्नुहोस्? - Learn Expert Blogging
WordPress लगभग इन्टरनेट मा एक व्यापक प्रयोग प्लेटफर्म हो 41% प्रयोगकर्ताहरु को WordPress मा आफ्नो वेबसाइट निर्माण. यो नि: शुल्क छ, खुला स्रोत, र ठूलो लचिलोपन छ. तपाइँ प्लगइनहरू मार्फत धेरै अनुकूलन विकल्पहरूको साथ तपाईं इच्छित दृष्टिकोण विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ.
WordPress प्लगइनहरू सीमित सुविधाहरूसँग स्वतन्त्र छन्. पूर्ण सुविधाहरूको फाइदा लिन तिनीहरूले तपाईंको पैसा खर्च गरे. भुक्तानी एक पटक वा पुन: आवर्ती हुन सक्छ जुन तपाईले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ सेवामा आधारित छ.
प्लगइनहरू एक WordPress प्लेटफर्मको सेक्सन हो. WordPress आफैंमा एक नि: शुल्क सफ्टवेयर जसले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ वेबसाइटहरू सिर्जना गर्नुहोस् र ब्लगहरू तपाई चाहानुहुन्छ. तपाईं सजीलै सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ, कोडका लाइनहरू थप्नुहोस्, repackage, बेच्नुहोस् र वितरण गर्नुहोस् किनकि यो एक सामान्य सार्वजनिक इजाजतपत्र अन्तर्गत खुला स्रोत नि: शुल्क सफ्टवेयर हो. यसको मतलब त्यहाँ त्यस्तो प्रकारको सेवा गर्न प्रतिबन्ध छैन. यद्यपि, ग्राहकहरूले कोड थप्नको लागि विकासकर्तालाई भुक्तान गर्दछ र माग अनुसार अनुकूलन सुधार गर्न.
WordPress प्लगइन्स पैसा खर्च
नि: शुल्क र फ्रिमियम WordPress प्लगइनहरू
यस्का साथसाथै, WordPress प्लगइनहरू कोडि c लाइनहरूको एक टुक्रा पनि हुन्, ती सुविधाहरूको विस्तारको रूपमा कार्य गर्दछ. म जहिले कार्यक्षमता बढाउनको लागि मेरो ग्राहकलाई प्लगइनहरूको प्रीमियम सुविधाहरूको लागि भुक्तानी सुझाव दिन्छु. एक PHP कोडिंग विकासकर्ता हुनु हुँदैन, म सँधै प्लगइनहरूको मद्दत लिन्छु.
जब म मेरो ग्राहकको लागी एक वेबसाइट बनाउँछु, म सँधै फ्रि प्लगइनहरूको सहयोगमा पूर्ण अनुकूलित वेबसाइट निर्माण गर्ने विचार गर्दछु. म तिनीहरूको खर्च बढाउन कहिले पनि प्रयास गर्दिन. कहिलेकाँही, मामला तब हुन्छ जब मेरो केहि ग्राहकहरु लाई उन्नत विशेष व्यावसायिक वेबसाइटहरु चाहिन्छ. यस इच्छाले मलाई प्रीमियम सुविधाहरूको लागि जान जोर दिन्छ।
त्यस्तै, केही महिना पहिले मैले खरीद गरें “एलिमेन्टर प्रो प्लगइन“. यो प्लगइन अब एक दिन ठूलो लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ. यस प्लगइनको फाइदा भनेको स्वचालित रूपमा ब्याकइन्डमा कोड लाइनहरू थप्न हो. यो प्लगइनको साथ, ड्र्याग एण्ड ड्रप फीचर थप्नुहोस् मलाई केही दिन भित्र विकास गर्न अनुमति दिन्छ. यो “एलिमेन्टर प्रो” प्लगइन मलाई खर्च गर्दछ 1000 प्लस डलर प्रति वर्ष आवर्ती.
फ्रीमियम प्लगइनहरू आइसक्रीम स्वाद जस्तै छन्. तपाईं आवश्यक स्कूप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न. तर तपाइँ सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि त्यस विशेष WordPress प्लगइनले कसरी काम गर्दछ, यो कसरी उपयोगी हुन्छ यदि तपाईं तिनीहरूको सेवा जारी राख्नुहुन्छ भने?
यदि तपाईं एक व्यक्तिगत शुरुआत हुनुहुन्छ, म व्यक्तिगत रूपमा तपाईं सुरूवाती चरणमा प्रीमियम प्लगइनका लागि जान सक्दिन. तपाईले एक पेशेवर स्तरसम्म निर्माणको सट्टा आवश्यक सुविधाहरूको साथ वेबसाइट विकास गर्नुपर्दछ. जब तपाईं तपाईंको व्यापार खरीदसँग बढ्दै जानुहुन्छ प्रीमियम प्लगइन केकको एक टुक्रा जस्तै हुनेछ.
यस बाहेक म तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा सिफारिश गर्दछु कि तपाईं अनियमित रूपमा प्रीमियम प्लगइनहरू डाउनलोड नगर्नुहोस्. मैले पहिले भनेझैं, तिनीहरू एक सामान्य सार्वजनिक इजाजतपत्र अन्तर्गत विकसित गरीन्छन्. यसको मतलब कुनै पनि व्यक्तिले यसमा कोडका लाइनहरू थप्न सक्दछ, repackage र इन्टरनेट लेबलि free सित्तैमा अपलोड.
यसलाई अवैध रूपमा डाउनलोड गर्ने नकारात्मक पक्ष भनेको तिनीहरूसँग कोडको एउटा टुक्रा छ जुन सजिलै ट्र्याक गर्न सकिन्छ र तपाईंको वेबसाइट पछि सजिलै ह्याक गर्न सक्दछ।. ह्याक भनेको कोडको आफ्नै लिखित टुक्रा पत्ता लगाउनु हो. उनीहरूलाई त्यो कोड क्र्याक गर्ने र वेबसाइटमा पहुँच प्राप्त गर्ने तरिका थाहा छ. यो तपाईको लागि वास्तवमा निराश हुन्छ. हामी व्यक्तिगत रूपमा सुझाव दिन्छौं कि तपाईं आधिकारिकबाट प्लगइनहरू डाउनलोड गर्नुहोस् WordPress भण्डार.
कुल मिलाएर, केही वर्डप्रेस प्लगइनहरू तपाईको पैसा खर्च गर्छन्, त्यहाँ WordPress हजारौं प्लगइनहरू छन्. तपाईं सजिलैसँग वैकल्पिक एक वा अर्को फेला पार्न सक्नुहुन्छ. यदि कसैले तपाइँलाई लागत, यसको मतलब यो होइन कि एक वैकल्पिक प्लगइन विकासकर्ताले त्यसो गरिरहेको छ. सबैभन्दा माथि, प्लगइनहरूले तपाईको मासिक पैसा खर्च गर्छन्, वार्षिक एक पटक, वा दोहोरिने आधारमा, यो पूर्ण रूपमा तपाईको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ कि तपाइँ यससँग कसरी जानुहुन्छ.
अरु के पढ्दैछन्?
के म गोदड्डीबाट डोमेन किन्न सक्छु र WIX मा होस्ट गर्दछु??